Madasha Badbaada Qaran oo sheegay in aysan aqbaleyn muddo kororsi una digay.... - Awdinle Online
Madasha Badbaada Qaran oo sheegay in aysan aqbaleyn muddo kororsi una digay….
Madasha Badbaado Qaran ayaa waxaa ay cadeeyeen in aysan marnaba aqabali doonin muddo kororsi ay Xildhibaanada u sameeyaan Madaxweynaha mudso xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo & Hay’adaha dowladda.
Qoraal kasoo baxay Madasha badbaado Qaran ayaa waxaa lagu shergay in masuuliyada dhibka soo gaara 15 ka xildhibaan ee loo hanjabay dusha ka saaraysa guddoomiyaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee Golaha Shacabka, Mudane Maxamad Mursal Sheekh C/raxmaan.
Hoos Ka Akhriso Qoraalka Madasha Badbaado Qaran.
Previous articleFarmaajo oo ka hadlay geerida Cumar Cabdiqaadir Barajab
Next articleGolaha Shacabka oo kulan walaac laga muujiyay maanta yeelanaya